क्रीमयुक्त कोड क्रोकेट्स | ThermoRecines
अतिरिक्त मलाईदार कड क्रोकेट्स
एपेटाइजरहरू1480 मिनेट25 व्यक्ति250२ क्यालोरी
हामी Thermorecetas मा ईस्टर मौसम को उद्घाटन यस स्वादिष्ट नुस्खा को साथ अतिरिक्त मलाईदार कड क्रोकेट्स। आज देखि हामी यस छुट्टीको खास केहि नयाँ रेसिपीहरू प्रकाशित गर्नेछौं, तर यो भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस् वेबको ईस्टर सेक्सन, जहाँ तपाईं यी दिनहरूमा आफ्नो मेनूहरू पूरा गर्न र परिवारका सदस्यहरूलाई चकित गर्नको लागि उत्कृष्ट व्यंजनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ क्रोकेट्सको असीम विविधता छ, तर विशेष रूपमा कोडको ती उत्कृष्ट र ईस्टर को लागी तिनीहरू उत्तम छन्। यो नुस्खा धेरै क्रीमी हुनेछ र कड यति राम्ररी लुकाइएको छ कि बच्चाहरु, यदि तिनीहरूलाई माछा मन परेन भने, तिनीहरूले समस्या बिना तिनीहरूलाई खान सक्छन्।
यो क्रोकेट्स बनाउन धेरै काम लिने हुनाले हामी उनीहरूलाई फ्राई गर्नु अघि फ्रिज गर्ने अवसर लिन सक्दछौं। रेसिपीको अन्त्यमा तपाईले फेला पार्नुहुनेछ केहि धेरै उपयोगी सल्लाह।
1 अतिरिक्त मलाईदार कड क्रोकेट्स
2 फ्रिज गर्ने सल्लाहहरू
3 पकाउने सल्लाहहरू
अति उत्तम र क्रीमयुक्त कोड र प्याज क्रोकेट्स। डिनरको लागि स्टार्टरको रूपमा र बच्चाको डाइटमा माछा सामेल गर्न आदर्श।
रेसिपी प्रकार: एपीरिटिभोस
तयारी समय: 24H
२०० ग्राम क्रीम
२०० डिसिल्टेड कोड
Gin० ग्राम कुमारी अलिभ तेल
१165 g मीठा chives
पीठको g० ग्राम
नुन (सावधानीका साथ किनकि कड नुनिलो हुनेछ)
हामी गिलासमा प्याज राख्छौं क्वार्टरमा र क्रशमा Seconds० सेकेन्ड, गति 8। हामी फिर्ता र आरक्षित।
हामीले काटिएको शीशामा क्रस बनायौं र क्रस गर्यौं Seconds सेकेन्ड, गति 10। दूध र क्रीम र कार्यक्रम थप्नुहोस् १ minutes मिनेट, चम्चा गति, 15 ० डिग्री तापमान। हामी फिर्ता र आरक्षित।
सिसा नधोईकन, माखन र तेल र प्रोग्राम थप्नुहोस् २ मिनेट, भेरोमा तापमान, चम्चा गति। प्याज थप्नुहोस् र पकाउनुहोस् १० मिनेट, तापक्रम १०० °, चम्चा गति।
हामी पिठो हालेर पकाउँछौं Minutes मिनेट, तापक्रम १०० °, गति १।
हामीले राखेको कोडको साथ दुध थप्नुहोस्, एक चुटकी जायफल र काली मिर्च र नुन (दुध आवश्यक छ भने मात्र) र कार्यक्रम Minutes मिनेट, तापक्रम १०० °, गति १।
हामी béchamel को पोइन्ट जाँच गर्दछौं। यो क्रीमी हुनुपर्दछ, तर अत्यधिक तरलको हुनु हुँदैन, अन्यथा, यो भंग गर्न र पछि फ्राउन असम्भव हुनेछ। मानौं हामी यो लासाग्नाका लागि तयार गरिएको बाचेमेल भन्दा बढी सुसंगत हुनुपर्दछ, तर एकै समयमा मलाई क्रीमी पनि बनाउनुहोस्।
अब हामीले आटा चिसो पार्नु पर्छ। हामी यसलाई एक विशाल कन्टेनरमा गर्न सक्छौं, जहाँ हामी आटा खन्याउँदछौं, यसलाई तेलले ब्रश गर्नेछौं र पारदर्शी फिल्मले कभर गर्नेछौं। वा हामी यसलाई पेस्ट्री बैगमा राख्न सक्दछौं (वा ब्याग जसमा हामी पछि पेस्ट्री ब्यागको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि कुनामा ब्रेक गर्नेछौं)। हामी यसलाई चिसो राख्छौं र अर्को दिन सम्म फ्रिजमा भण्डार गर्दछौं।
हामी क्रोकेटहरू बनाउँदछौं, तिनीहरूलाई पीठो, अण्डा र ब्रेडक्रमहरूमा पार गर्नुहोस् र फ्राई वा फ्रिज पछि फ्राई गर्न।
हामी यसलाई कन्टेनरमा आराम दिन्छौं जबसम्म यो शान्त हुँदैन।
फ्रिज गर्ने सल्लाहहरू
जब हामी क्रोकेटहरू बनाउँछौं यसको लागि यो लायक छ, किनकि तपाईंले आफैंलाई पिट्नु भयो, तिनीहरूलाई स्थिर गर्न फाइदा लिनुहोस्.
म निम्न सिफारिस गर्दछु: फ्रिजरमा कोठा बनाउनुहोस्। क्रोकेटहरू रोटी गर्नुहोस् र प्लेट वा ट्रेमा राख्नुहोस् राम्रोसँग एक अर्काबाट अलग र उनीहरूले छोएनन्। हामी प्लेट वा ट्रे फ्रिजरमा राख्छौं र लगभग hours घण्टा यसको लागि स्थिर गर्नका लागि कुर्दछौं।
एकचोटि फ्रिज गरेपछि, हामी प्लेटबाट एउटा चम्चाको सहायताले त्यसलाई हटाउँछौं र यसलाई एमा राख्छौं फ्रीजर झोला। त्यसोभए हामी तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र एक अर्कामा नचाहिने प्रयोग गर्न सक्दछौं तबदेखि ती खोल्न सकिन्छ जब हामी त्यसलाई फ्राई गरिरहेका छौं।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि जब हामी क्रोकेट्स फ्राई गर्दछौं तेल धेरै तातो छ र यो सुनिश्चित गर्न हामी प्रयास गर्दछौं कि तेल उनीहरूमा कभर गर्न पर्याप्त छ।
आदर्श रूपमा, एक गहिरो फ्रायर वा कन्टेनर उत्तम हो। यदि तिनीहरू पूर्ण रूपमा कभर गरिएको छैन भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले तिनीहरूलाई हरेक 30० सेकेन्डमा तिनीहरू परिवर्तन नभएसम्म बदल्नुहोस् राम्रोसँग खैरो
सँग प्लेटमा छोड्नुहोस् शोषक कागज सेवा गर्नु अघि अधिक तेल हटाउन।
थप जानकारी - ब्लगको ईस्टर सेक्सन
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » अतिरिक्त मलाईदार कड क्रोकेट्स
तिनीहरू ताजा कोडको साथ बनाउन सकिन्छ
नमस्ते ईवा, यदि तपाईं तिनीहरूलाई ताजा कोडको साथ बनाउन सक्नुहुनेछ, तपाईंले कड, दूध र बुचमेलको लागि नुनको मात्रा बढाउनुपर्नेछ। भाग्यमानी!
toÃ ± i भन्यो
नमस्ते, ती चुलोमा बनाउन सकिन्छ?
Toñi लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते तोई, मैले तिनीहरूलाई कहिले पनि चलाएको छैन, तर कहिलेकाहिँ मैले चुलीमा रोटी बनाएको छु र ती गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, तिनीहरू भुटेको जस्तो क्रिष्ट र धनी हुने छैनन्, तर तिनीहरूलाई खान सकिन्छ। म सुझाव दिन्छु कि तपाईंले ट्रेमा तेलको तेल खसाल्नुहोस् र शीर्षमा तेलको थोसी पानी। मैले ओभनलाई २०० डिग्रीमा सेट गर्ने थियो। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ!
मैले यस विधिलाई चरण-चरण क्रमशः अनुसरण गरेको छु र सटीक रकमको साथ र Béchamel सुपर तरलमा बाहिर निस्कीएको छ ... के भयो थाहा छ? ...
नमस्कार जोटाकू, वास्तवमा यो नुस्खाको जोखिम यो हो। हामी केहि थप क्रीमी क्रोकेटहरू खोज्दै थियौं, र तपाईले दूध / पिठो प्रयोग गर्दा तपाईले धेरै तरल बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्छु जब तिनीहरू धेरै चिसो हुन्छन्, वास्तवमा, म तिनीहरूलाई नर्हाउनु भन्दा minutes० मिनेट पहिले फ्रिजरमा पिठो हाल्छु, ताकि म तिनीहरूलाई राम्रोसँग कोट गर्न सक्दछु। यसले उनीहरूलाई डबल गर्न पनि मद्दत गर्दछ, अर्थात, पिठो-अण्डो-ब्रेडक्र्याम्ब्स अपरेसन दुई पटक दोहोर्याउनुहोस्। तपाईंले देख्नुहुनेछ कत्ति रमाइलो हुनेछ जब तपाईं उनीहरूलाई टोक्नुहुन्छ ... तिनीहरू लगभग भित्र तरल छन्!
जे भए पनि, यदि तपाईले बाछाललाई तयार गरिसकेपछि देख्नुहुन्छ कि यो अत्यधिक तरल भएको छ भने, flour० ग्राम आटा थप्नुहोस्। र यदि तपाईंले पहिले नै यो गिलासबाट हटाइसक्नुभयो र यो पहिले नै चिसो छ भने, यसलाई गरम गर्नुहोस् र ती grams० ग्राम आटा थप्नुहोस्।
अंगालो र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद !! (म नुस्खामा पीठोको मात्रा बृद्धि गर्दैछु, बेकमेललाई अत्यधिक तरल पदार्थ लिनबाट रोक्न)।
नमस्ते म देख्दिन जब तपाईं केहि थप्नुहुन्न। दुधको साथ?
मलाई क्रीम भन्न मन लाग्यो, माफ गर्नुहोस्।
वास्तवमा मार्था, दुधको साथ, अहिले म यसलाई सुधार गर्छु। धन्यवाद !!
तपाईंलाई इरेन धन्यवाद।
तपाईंले यसलाई सुधार गर्नु भएको छैन तर मैले सोच्दै गरेको छु
लुसियानालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार लुसियाना, यो पहिले नै परिमार्जन गरिएको थियो, तपाईंले दूधको साथमा क्रीम थप्नु पर्छ।
नमस्कार, नुस्खामा दूधdथप्ने चरणdदुई पटक देखा पर्दछ। के त्यो आधा सुरुमा फ्याँकियो र बाँकी? मैले बुझिन। धन्यबाद
हाई मारिया, पहिले तपाईले दुधको साथ कड उमाल्नुहुन्छ र यसलाई सिसाबाट हटाउँनुहुन्छ। त्यसकारण त्यसोभए तपाईंले फेरि फेरी फाल्नु पर्छ। मैले यसलाई नुस्खामा अलि राम्रो गरीएको छु त्यसैले त्यहाँ कुनै गडबड छैन। तिम्रो सन्देशको लागि धन्यवाद! तपाईं मलाई उनीहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नुहुनेछ, ठीक छ?
शुभ दिउँसो। कतै पनि उल्लेख गरिएको पीठको मात्रा छैन। धन्यवाद
नमस्कार अन्ना, सामग्रीहरू देखा पर्दछ: १ g० ग्राम पीठो। तपाईं मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ, धन्यवाद!
शानदार ...... यो मसँग कहिल्यै राम्रो क्रोकटहरू थिए।
ओली ओली ओली, तपाईको सन्देश लोरेनाको लागि धेरै धन्यबाद, तपाईले मेरो दिन बनाउनु भयो! धेरै कडा चुम्बन र हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि धन्यबाद thank
नमस्कार !! म तिनीहरूलाई फ्रिज कोडको साथ बनाउन चाहन्छु, मैले भर्खरको कडको लागि केही सल्लाहहरू देखेको छु, मलाई लाग्छ यो त्यस्तै हुनेछ तर दुध र बुचमेलको बारेमा यो स्पष्ट छैन। धन्यबाद 🙂
Verobe लाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो भेरोबो, तपाई पहिले नै ड्यास्लेटेड फ्रोजन कोडको समस्या बिना नै गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले भर्खरै यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि यो राम्रोसँग पग्लिएको छ र सुक्खा छ र यस तरीकाले पकाउने विधिहरू अनुसरण गर्नुहोस्। धन्यवाद!
माइगेल एtel्गेल भन्यो
ठीक छ, मैले अब फ्रिजमा पिठो बनाए र दिउँसो म तिनीहरूलाई बनाउँछु,
नुस्खा को लागी धन्यवाद, तपाईको अनुमति संग म यसलाई राख्छु
Angel Angel लाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक मिगुएल, उनीहरूले तपाईंलाई कसरी फिट गरे? म आशा गर्दछु कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ र कि यो तपाईं उनीहरूलाई गडबड गर्न धेरै खर्च गर्नुहुन्न, धेरै क्रीमयुक्त हुनाले ... कहिलेकाँहि यसको लागी केही खर्च लाग्दछ। शुभकामना!
तपाईले भन्नुभए जस्तै मलाई यी अतिरिक्त क्राइमहरू जस्तै क्रोकेट्स मनपर्छ .. मेरो प्रश्न त्यहाँ जान्छ .. के म कुनै अन्य घटकको लागि कोडलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छु? कुखुरा, गोमांस, हेम हेर्नुहोस्।
नमस्ते पाउला, यदि तपाइँ मलाई क्रीमी ह्याम वा कुखुराको व्यंजनहरू पनि मनपराउँनुहुन्छ भने, यी जाँच गर्नुहोस्!: स्वादिष्ट पकाएको क्रोकेट्स
यदि तपाईंसँग स्ट्यु ब्रोथ छैन भने, दूध बदल्नुहोस् र केही मिनेटको लागि त्यो दुधमा हेम हड्डी पकाउनुहोस्।
मलाई आशा छ तपाईंले उनीहरूलाई रमाईलो गर्नुभयो 🙂
आटा धेरै तरल बाहिर आउँछ !!! क्रोकेट्स बनाउनको लागि असम्भव।
यदि तपाइँ इन्टर्नेटमा एक रेसिपी राख्नुहुन्छ भने, परिमाण राम्ररी जाँच्नुहोस् र तिनीहरूलाई आँखामा नराख्नुहोस् किनभने हामी जाँदैछौं ... किनकि यो विधि पनी समय बर्बाद गर्नु हो।
Juste लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते Juste, मलाई माफ गर्नुहोस् तपाईंले राम्रो गर्नुहुन्न। जे होस्, म तपाईंलाई यो बताउनको लागि यो अवसर लिन्छु कि तपाईंको टिप्पणी एकदम अशिष्ट छ। तपाईंले यस ब्लगमा फेला पार्नुहुने सबै व्यञ्जनहरू विस्तृत र हामीद्वारा फोटो खिचिएका छन् र निस्सन्देह, प्रमाणित भन्दा बढि। तसर्थ, सबै व्यञ्जनहरू तौल र मापन गरिन्छ, र कुनै पनि परिस्थितिमा हामीले तपाईंको टिप्पणीमा उल्लेख गरे अनुसार "आँखाद्वारा" रकम राख्दैनौं। Thermorecetas टोली वास्तवमै काम गर्ने परीक्षण रेसिपीहरू बनाउन पर्याप्त पेशेवर छ, जसमा हामी धेरै समय र प्रयास समर्पित गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ, पीठोको प्रकार वा प्रयोग गरिएको दूधको प्रकारले क्रोकेटहरू जस्तै नुस्खाको परिणाम फरक हुन सक्छ।
तयारीको बिन्दु 8 मा तपाईंले यो पढ्नुहुनेछ: «हामी बेचेमेलको बिन्दु जाँच गर्छौं। यो क्रीमयुक्त हुनुपर्छ, तर अत्यधिक तरल होइन, अन्यथा, यो उल्लङ्घन गर्न र पछि फ्राइ गर्न असम्भव हुनेछ। लसग्नाको लागि हामीले तयार गर्ने बेचेमेल भन्दा यो अधिक सुसंगत हुनुपर्छ भनौं, तर एकै समयमा क्रीमयुक्त हुनुपर्दछ »। यदि तपाईंले आफ्नो बेचमेल धेरै बगेको देख्नुभयो भने तपाईंले किन थप पीठो थप्नुभएन?
र अन्तमा, एक पाठकले केही समय अघि हामीलाई यो टिप्पणी छोडे "स्पेक्टाकुलर ……. मसँग भएको सबैभन्दा राम्रो क्रोकेटहरू"। त्यो हो, त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले तिनीहरूलाई प्रयास गरेका छन् र तिनीहरू राम्रो भएका छन्। मलाई माफ गर्नुहोस् कि यो तपाईंको मामला थिएन, अर्को पटक तपाईंले थप शिक्षा र सम्मानका साथ टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि हामीले तपाईंको आटा ठीक गर्न र केही शानदार क्रोकेटहरूको आनन्द लिन निर्देशनहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्ने थियौं।
माफी चाहन्छु यदि मैले तपाईंलाई अपमान गरेको छु भने। मैले भन्नु छ कि क्रोकेट्स निक्कै मीठो रमाईलो छ। तर तपाईले राख्नु भएको मात्रामा निर्भर गर्दै, पीठो एकदम तरल बाहिर आउँछ (कसैले यसमा पहिले नै टिप्पणी गरेको छ) र तपाईले यसको साथ केही गर्नु पर्छ यसलाई राम्रो देखाउनको लागि, बढी पिठो थप्नुहोस् वा थोरैमा छोड्दा पीठो घटाउनुहोस्। कम गर्मी (मैले गरे जस्तै)। मेरो मतलब यो छ कि थर्मोमिक्सले खाना पकाउने कामलाई अलि सजिलो बनाउँदछ र केही समय बचत गर्दछ। जब म इन्टरनेटमा एक थर्मोमिक्स रेसिपी खोज्छु, म यसलाई आधिकारिक र भरपर्दो वेबसाइटबाट छान्छु। अधिकांश व्यंजनहरु म चम्चा गतिबाट वा आधिकारिक थर्मोमिक्स पुस्तकहरूबाट छनौट गर्दछ र ती कहिले निराश हुँदैनन् किनभने मात्रा र समय राम्ररी नापिएको छ र प्रमाणित छ। धेरै समय अगाडि मैले केहि ब्ल्गहरू वा अन्य पृष्ठहरूमा व्यग्र विधिहरू हेरेँ, तर म थाकेको छु किनभने तपाईं कुनै चीज बिना कुनै समस्याको, चाँडो चाहानुहुन्छ भने तिनीहरू राम्रोसँग बाहिरिने छैन। मैले तपाईको पृष्ठलाई भरपर्दो ठान्दछु।
यी क्रोकेटहरूका लागि तपाईं कस्तो प्रकारको र पीठोको पिठो प्रयोग गर्नुहुन्छ? मलाई के गर्न मनपर्‍छ रेसिपी पछ्याउँदै खाना पकाउँदै छ ताकि आटा राम्रोसँग बाहिर आउँदछ, यसलाई चिसो हुन दिनुहोस् र क्रोकेट बनाउनुहोस् र अरू केही सोच्नुहोस्। त्यो यस रोबोटको आराम हो।
लामो समयदेखि मैले थर्मोमिक्स किनेको हो र मैले यो स्वीकार्नुपर्दछ कि कुन रेसिपी अनुसार यो अद्भुत छ, तर क्रोकेट्सका लागि यो कष्टकर छ।
Bechamel एक सही नुस्खा हो, एक आटा र बोसो बराबर भागहरु संग एक राउक्स, sautéed र दूध संग पातलो। तपाईंले आटा राम्रोसँग पकाउनुपर्दछ, ताकि पिठो कच्चा स्वाद हुँदैन, जबसम्म यो कन्टेनरको भित्ताबाट अलग हुँदैन। यसको लागि मेशीनले प्रस्ताव गरेको भन्दा उच्च तापक्रम चाहिन्छ, छोटकरीमा, यसले गाढा बनाउनको निम्ति बढी पिठो जोड्न बाध्य पार्छ, यही कारणले बोचामेल पेस्टी भएको छ र खाना पकाएको अभावले कच्चा स्वाद छ, ती हुन् विशिष्ट ईन्क्रोकेट्स तल्ला र चिसो पट्टि झूठो तिनीहरू धेरै रमाइलो छैन।
उनले अनुभवबाट मलाई दिने ज्ञान र कसैलाई दु: ख दिने मनसाय बिना नै यी सबै कुरा बताइदिएका छन्, यदि होइन भने उनीहरूले मेरो सल्लाहको राम्रो नोट लिनेछन्।
मैटिकालाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, मैले तिनीहरूलाई बनाउने निर्णय गरेको छु र सत्य यो हो कि मैले तिनीहरूलाई फ्याँक्नु पर्ने थियो किनभने म सुपर तरल भएको छु, र किनभने नुस्खाले यो गर्दैन कि यदि यो तपाईलाई भयो भने के गर्नु पर्छ, र मैले हालसालै मेसिन लिएको छु, सत्य सत्य हो कि नुस्खा को रूप मा नै गरे पछि, हामी के गर्न को लागी राख्नुहोस् यदि यो धेरै नरम बाहिर आउँछ।
रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो रोजा, मँ माफ गरीस छु। तर यसलाई बाहिर फ्याक गर्नु अघि, यहाँ एउटा टिप्पणी लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् कि हामी तपाईंलाई एउटा समाधान दिन्छौं र त्यस तरिकाले तपाईंले यसलाई फ्याँक्नु हुँदैनथ्यो ... यसले उनीहरूलाई तयार पार्नुभन्दा पहिले रेसिपीहरूमा भएका सबै टिप्पणीहरू पढ्न पनि मद्दत गर्दछ किनकि उही चीज तपाईलाई भयो र हामी आफैंले यसमा कमेन्टमा टिप्पणी गरिसकेका छौं। समाधान भनेको थप पिठो हालेर फेरि पकाउनु हो। मलाई आशा छ अर्को पटक तिनीहरू अझ राम्रो बाहिर निस्के। शुभकामना!
नमस्ते, म यी क्रोकेटहरू बनाउने सोचमा छु। तर मँ त्यहाँ मान्छेहरु छन् जो धेरै तरल बेकेमेल हुन्छन्। मैले एक टिप्पणी पनि पढेको छु जुनमा तपाईं संकेत गर्नुहुन्छ कि तपाईंले पीठोको मात्रा सुधार गर्नुपर्नेछ र g० ग्राम वृद्धि गर्नुपर्नेछ। मेरो प्रश्न यो हो कि कति पिठो २१० ग्राम हुनेछ?
नमस्कार! २१० ग्राम आटाको साथ बनाउनको लागि कोही छ कि? ती कसरी छन्? धन्यबाद
मैले रेसिपी यस्तै बनाएँ, मैले अलि बढि कोड थपें ​​र त्यसलाई भट्टीमा बनाउने प्रयास गर्ने निर्णय गरें ... तिनीहरू नेत्रहीन बाहिर आए, केवल थोरै पीठो रोटीबाट नै बाहिर आयो ... तर तिनीहरू आए राम्रो बन्द किनभने मैले ट्रेमा ग्रीसप्रुफ कागज राखेको छु र त्यसपछि क्रोकेट्स शीर्षमा राख्छु।
नमस्ते सोनिया, तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यवाद! सायद तातो चुली र ओलिभ तेलको थोपाले (वा क्रोकेटहरू सफा गर्दै) र क्रोकेटलाई एकदमै चिसो राख्दा पनि पीठोलाई नहेर्न मद्दत गर्दछ। हामी खुशी छौं कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो! हामीलाई अनुसरण गर्न को लागी धन्यवाद 😉
लुर्डस HUETA भन्यो
ठीक छ, पहिलो कुरा जुन म एक Thermomix लाई हुकुम दिन्छु जस्तो म बाँच्न सक्दिन
मैले रेसिपी बनाएको छु र यसलाई फ्रिजमा चिसो हुन पर्खिरहेको छु। पीठो र दूध + क्रीमको मात्रा देख्ने बित्तिकै मलाई अलिकति शंका लाग्यो, तर क्रिममा क्रिम हालेको पहिलो पटक भएकोले मैले "र किन नहोस्" भनेँ तर मलाई डर लाग्यो। उच्चतम तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्न पर्याप्त बाक्लो छैन (तपाइँले एक स्ट्रेनरको मद्दतले अलि बढी पीठो थप्नु पर्छ र मैले 1 ग्राम थप खौरेको छु)
अन्यथा उनीहरू धेरै राम्रा देखिन्छन् र यो लाग्छ कि तिनीहरू धेरै रसदार हुनेछन् तर यदि कसैलाई चासो छ भने, सजिलो-लिन-क्रोकेट्सको उपाय १ 160० वा १ 170० ग्राम दुधको लागि छ।
सबैलाई अभिवादन छ र यी पृष्ठहरूबाट प्रोत्साहित भएका स्वादिष्ट व्यंजनहरू बनाउनमा मद्दत गर्दछन्
Lurdes HUETA लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै क्रीमयुक्त हो, यति धेरै कि यो मिसन सम्भव छ उनीहरूलाई गठन गर्न। मैले यसलाई दुईपटक प्रयास गरेको छु र अन्तमा मैले पिपराहरू भर्नका लागि आटा प्रयोग गर्नुपर्‍यो। पीठो एकदम तरल छ, र पिठो थपेमा पनि यसले समाधान गर्दैन, म अनुमान गर्दछु किनकि मलाई सहि रकम थाहा छैन।
नमस्ते कार्मेन, म कति दु: खी छु। तर यो विरलै छ कि अधिक पीठो थपेमा समस्या समाधान हुँदैन ... के तपाईंले एकदम धेरै चिसो आटासँग काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो?
दूध फ्रान्सेली टोस्ट
मरीनेट गरिएको पसलको साथ मलाईदार चामल